Fahatsiarovana ny 11 febroary 1975 | Primature
Fahatsiarovana ny 11 febroary 1975
11 février 2020 30 mars 2021
Mahazoarivo, ny 11 febroary 2020 – Tonga nanome voninahitra ny lanonana nahatsiarovana ny namonoana ny Kolonely Ratsimandrava Richard, Filoham-panjakana tamin’ny izany fotoana izany, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany maraina teny Ambohijatovo. Lanonana izay niarahan’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ny ministeran’ny Filaminana Anatiny, sy ny Fiadidian’ny Zandarimaria nikarakara, ary nahatsiarovana ihany koa an’ireo olo-malazan’ny Foloalindahy sy mpitandro ny filaminana lavo teo am-perinasa nandritra ny taona 2019. Nisy solon-tena avy amin’ny Fiadidian’ny Repoblika ary olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila avy amin’ireo andrim-panjakana, tonga nanatrika izany fotoam-pahatsiarovana izany.
Fotoam-pivavahana niraisam-pinoana no nanombohana ny fotoana, ary nisy ny fanolorana famangiana ho an’ny ankohonan’ireo mpitandro filaminana namoy ny ainy, araka ny voalaza etsy ambony.
Nambaran’ny Praiminisitra fa zava-dehibe ny fahafahan’ny firenena mahatsiaro ireo olo-mangany, ary maro ny lesona azo tsoahina amin’izao fanamarihana izao, misy tsirim-panantenana betsaka ho an’ny vahoaka malagasy, ny amin’ny mpitandro ny filaminana izay andry iankinan’ny fandriampahalemana eto anivon’ny firenena araka izay voalazan’ny Filohan’ny Repoblika. Ny fitondram-panjakana dia mametraka mazava tsara fa tsy misy fanarenana, tsy misy fahombiazana amin’ny ho avy raha tsy mahay mahatsiaro ny fitiavan-tanindrazana izay nasehon’ireo zoky ray aman-dreny teo aloha isika. Ary izany fitiavan-tanindrazana izany dia fanoitra hoentin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, indrindra ireo mpikambana ao amin’ny foloalindahy sy ny polisim-pirenena, hitafy ny herin-tsaina mba hahafahana manao ny andraikiny, satria ny filaminana sy ny fandriampahalemana dia antoky ny fampandrosoana ny firenena. Notsiahiviny fa ny Filoham-pirenena dia nametraka ny tsy maintsy hamerenana ao anatin’ny fotoana fohy izany filaminana sy fandriampahalemana izany manerana ny Nosy. “Taratry ny ho avy ny ezaka efa natao teo aloha, sy izay ezaka mbola asehontsika amin’izao fotoana izao”, hoy izy, ary nomarihiny fa amin’izao fotoana izao dia hita taratra fa efa manomboka miverina ny fifampitokisana eo amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka, ary efa manomboka miverina tsikelikely izany fandriampahalemana izany.
Manoloana izany dia nohazavainy fa miandrandra fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa isika amin’izao fotoana izao, ary tokony handray lesona amin’ny nanoloran’ireo olo-manga ny ainy ho an’ny tanindrazana isika izay mahatsapa fa manana andraikitra amin’ity firenena ity. Voakasik’izany ireo mpitandro ny filaminana rehetra, izay tokony hirotsaka eo amin’ny sehatr’ireo vavahady maro izay misy eto anivon’ny firenena.
Teo am-pamaranana dia nambaran’ny Praiminisitra fa ezaka iombonantsika no hatao ary tsy vitan’ny androany ihany, ka tsy maintsy ezahina lalandava. Koa nanantena ny tenany mba tsy ho fankalazana fotsiny no natao androany, ary tsy ho fahatsiarovana fotsiny, fa hitondra fahasahiana hiara-mijoro hametraka ny fampandrosoana.
← Conseil du Gouvernement du Mardi 04 Février 2020
Conseil du gouvernement du Mercredi 12 février 2020 →